WQGS Submersible မိလ္လာ Pump - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း SOG ညှစ်ထုတ်လိုက်
WQGS နှင့် GWQ စီးရီး Non-ခုံဖိနပ်နစ်မြုပ်မော်တာပန့်များတင်းကြပ်စွာသူတို့စီးပွားဖြစ်စွန့်ပစ်ရေ, နေ့စဉ်စွန့်ပစ်ရေ, မြို့စွန့်ပစ်ရေများရေနုတ်မြောင်းစနစ်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ကြောင်း, ဆွေမျိုးအမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်စမ်းသပ်နေကြသည်။
မက်စ်။ flow: 300m³ / h
Max.Head: 20 မီတာ
1. Ambient အပူချိန်: 0-40 ℃
2. အများဆုံးအရည်အပူချိန် + 40 ℃
4-10 ကနေ 3. PH ကိုအဆငျ့
4. အများဆုံးအရည်သိပ်သည်းဆ 1.2 * 10kg / m³
5. ပါဝါအကြိမ်ရေ 50Hz ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ခံဗို့အားတစ်ခုတည်းအဆင့်များအတွက် 220VAC ဖြစ်ပါသည်
ထိုအ -100% ကနေ 10% အထိအကွာအဝေးနှင့်အတူသုံးအဆင့်များအတွက် 380VAC ။
0.5m-5 သန်းနဲ့ထံမှ 6. immersive အတိမ်အနက်
WQGS စီးရီး Non-ခုံဖိနပ်နစ်မြုပ်မော်တာပန့်များအလေးအနက်ထားညစ်ညမ်းစက်ရုံများနှင့်စီးပွားဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်စွန့်ပစ်ရေ, လူနေအိမ်ဧရိယာထဲမှာမိလ္လာယိုစီးဘူတာရုံ, မြို့စွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံအတွက်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်, အရပ်ဘက်ကာကွယ်ရေးများအတွက်ဘူတာရုံဖျန်ကိုထိပုတ်ပါအတွက်ရေပေးဝေရေး၏ဥတုများအတွက်သက်ဆိုင်များမှာ စွန့်ပစ်ရေနှင့်ညစ်ညမ်း granules င်အဖြစ်သန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့စားနတ်ကတော်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ရေစက်ရုံ, ဆေးရုံများနှင့်ဟိုတယ်များအတွက်မိလ္လာဥတု, စည်ပင်သာယာစီမံကိန်းများဆောက်လုပ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များ, တူးဖော်ရေး, မိုင်းကျေးလက်မီသိန်းရေကူးကန်, စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစသည်တို့ကို။
1.Insulation အတန်းအစား: F ကို
QT 450-10 ပစ္စည်း 2.The ရေယဉ်လှုံ့ဆျော။
3.Stainless သံမဏိရိုး extension ကို, carbide နှစ်ဆ -sides စက်မှုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
4.Double ရုပ်သံလိုင်းလှုံ့ဆျော, ကောင်းသောစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းဆောင်ရည်။
အခွားသောဗို့သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေ 60HZ ဖြစ်ပါသည်
ဂဏန်း ပုံစံ စီးဆင်းမှု ဟိုက်ဒရောလစ်ခေါင်းကို RPM ဗို့အား စွမ်းအား အမြင့်
(m³ / ဇ) (ဍ) (r / မိနစ်) (V) (kW)
WQGS (GWQ) စီးရီး:
WQGS ၏ installation ရှုထောင်ပုံဆွဲ (GWQ) စီးရီး Non-အနီးကပ် fixed နစ်မြုပ်မော်တာစုပ်စက်။
installation, စစ်ဆင်ရေးနဲ့ Maintenance ညွှန်ကြားချက်များ:
●ဒါဟာသာမန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောခြိုးဖောကျဝါယာကြိုးများနှင့်ပူးတွဲ delinking ရှောင်ရှားရန်လျှပ်စစ်စုပ်စက်၏ installation နဲ့ဖယ်ရှားရေးအတွက်အင်အားနှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးဆွဲထုတ်ဖို့တားမြစ်ထားသည် စစ်ဆင်ရေးပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပင်အပူလောင်;
●လျှပ်စစ်စုပ်စက်၏ installation အတွက်မှန်ကန်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော cable ကိုမွကွေီးပျေါမှာသေချာပါစေ။ ဒါဟာစစ်ဆင်ရေးရေဧရိယာချဉ်းကပ်ဖို့လူသားမြားသညျသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များအဘို့တားမြစ်ထားသည် သို့မဟုတ်ပါကအလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါလျှပ်စစ်စုပ်စက်တို့ထိ။ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်သာမြေကြီးတပြင် plug ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်;
● Overload စစ်ဆင်ရေးတားမြစ်ထားသည်,
●ပန့်များနှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့ကြိုးတွေလျှပ်စစ်စုပ်စက်ဧရိယာ၏ 1.2 ကြိမ်ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်;
အဆိုပါစုပ်စက်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းရေထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးပြီးတာနဲ့●, လျှပ်စစ်စုပ်စက်ကိုမဆိုပြောင်းပြန်လည်ပတ်မှုအတွက် check လုပ်ထားရပါမည်သို့မဟုတ်ထိုရေထွက်ပေါက်နှုတ်၌စစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်မဆိုကျန်နေတဲ့လေထုအဘို့အ check လုပ်ထားရပါမည်;
●အဆင့်-to-အဆင့်နှင့်လျှပ်စစ်စုပ်စက်၏မော်တာ၏ဆွေမျိုးမြေပြင်မှမြေပြင်လျှပ်ကာခုခံ2MΩထက်မနိမ့်တော်လှန်ရေးနှင့်အတူပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ရပါမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ထိုပစ္စည်းကိရိယာများစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ဘို့ disassembled ရပါမည်;
သတ်မှတ်သောအလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင်ပုံမှန်လည်ပတ်၏ထက်ဝက်မှာတစ်နှစ်ပြီးနောက်●, လျှပ်စစ်စုပ်စက်အခွအေနေပိတျထားသောရေနံအခန်း check လုပ်ထားရပါမည်။ ရေနံ emulsified သို့မဟုတ် sedimented ရေထွက်ကြွလာ, 10 # စက်ရေနံနှင့်စက်မှုတံဆိပ်ကိုအစိတ်အပိုင်းများအချိန်မီထုံးစံ၌အစားထိုးသင့်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့;
●တစ်ခုမှာအကြီးစားပြုပြင်အလုပ်တစ်နှစ်ပုံမှန်လည်ပတ်ပြီးနောက်ကောက်ယူရပါမည်: ဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများအစားထိုးသင့်ပါတယ်စွဲစေကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ရပါမည်နှင့် ချောဆီဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်သာမန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချောဆီအရည်ကြည်ကိုသေချာစေရန်အစားထိုးခံရသင့်သည်,
ချို့ယွင်းသည် အကြောင်းမရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပပျောက်ရေးနည်းလမ်းများ
မလုံလောက်စီးဆင်းမှုသို့မဟုတ်လုံးဝမရေ 1.mistaken ဓါးကို item ပါဝါဆားကစ်မဆိုနှစ်ခုအဆင့် sequence ကို adjust
ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်၏ 2.openness နှင့်ပြည့်စုံ အဆို့ရှင်စစ်ဆေးခြင်း
အဆို့ရှင်နှင့်အစုပ်စက်အကြားပိုက်ထဲမှာ 3.left လေကြောင်းကခက်ခဲဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကို ယင်းပိုက်ထဲမှာလေထုကိုထမ်းရွက်
4.too အနိမ့်အလှည့်မြန်နှုန်း ဗို့အားဒီဂရီများအတွက် power supply စစ်ဆေး
5.excessive တံဆိပျကိုလက်စွပ်ပွန်းပဲ့ အစားထိုးဖို့
အရည်အတွက် 6.high သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်ထဲမှာပါတဲ့ အရည်များ၏သိပ်သည်းမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကိုပြောင်းလဲ
7. ပိုက်များနှင့်ဓါးပိတ်ဆို့ခြင်း ယင်းပိုက်များနှင့်ဓါးသွားအတွက်အတားအဆီးဖယ်ရှား
မတည်မငြိမ်လျှပ်စစ်စုပ်စက်လည်ပတ် 1.blade မညီမမျှ ကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်လုပ်ကိုင်ရန်ဘီး balancing
2.bearing ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အစားထိုးဖို့
3.overload စစ်ဆင်ရေး လျှပ်စစ်စုပ်စက် Overload ရှောင်ရှားရန်အဆို့ရှင် adjust
4.sliding တပ်ဆင်ခြင်း installation ကိုနောက်တဖန်
အနိမ့် insulator တွင်လည်းခုခံ ကေဘယ်လ်နှင့်အာဏာဆားကစ်၏ဝါယာကြိုးအဆုံး၌ 1.leakage တင်းကျပ်စွာခညျြနှောငျနှင့်စာနယ်ဇင်းအခွံမာသီး
ဦးခေါင်းကနေ 2cable ဝါယာကြိုးများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ရေဝင်ဝ အစားထိုးဖို့
3.mechanical တံဆိပျကိုပွန်းပဲ့ အစားထိုးဖို့
4.O-shaped တံဆိပျကိုလက်စွပ်အိုမင်းနှင့်ကျရှုံးမှု အစားထိုးဖို့
အလွန်အကျွံလက်ရှိ 1.low အလုပ်လုပ်ဗို့ အလုပ်လုပ်ဗို့အားချိန်ညှိ
2.blade ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ညပ်-up, ယင်းပိုက်နှင့်အရည်အတွက်သန့်ရှင်းတဲ့အတားအဆီး
အရည်အတွက် 3.high သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်ထဲမှာပါတဲ့ အရည်များ၏သိပ်သည်းမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကိုပြောင်းလဲ
4.excessive အဆို့ရှင်ပွင့်လင်း အဆို့ရှင်ပွင့်လင်း adjust
ယခင်: reverse osmosis water boosting high pressure ro vertical pump and pumps
နောက်တစ်ခု: high quality stainless steel centrifugal pump for high rise building booster
မိလ္လာ Pump non-Blocking
မိလ္လာ pump ပေးသွင်း
Submersible Grinder မိလ္လာ pump
Wqk မိလ္လာ Pump